Homeबिबिधके काम गर्छन ऋ’चा शर्माका श्री’मान ?
काठमाडौं । अभिनेत्री ऋचा शर्मा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । उनले यस अघि नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विवाहको कार्ड सार्वजनिक गर्दै विवाह बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएकी थिइन् । दुई वर्षयता दिपेक्ष विक्रम राणासँग प्रेममा रहेकी उनले शनिबार विवाह गरेकी हुन् । विवाह पछि तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसवारे पनि जानकारी गराएकी छन् ।
शनिबार दिउसो मात्रै उनले विवाह बन्धनमा बाँधिएको तस्वीर फेसबुकमा मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । तस्बिर सार्वजनिक भएसंगै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ । दुलहीको भेषमा सजिएकी ऋचाले श्रीमानको हात समातेको तस्विर साझेदार गर्दै फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘जिन्दगीको अर्को सुनौलो प्रहरमा यहाँहरुको अथाह माया अनि आर्शिवाद सदैब यसरी नै मिलोस् ।’ तस्विरमा ऋचा र दिपेक्षलाई खुसी मुद्रामा देख्न सकिन्छ । उनीहरु गएको दुई वर्षदेखि एकअर्कालाई डेट गरिरहेका थिए । तर, ऋचाले लामो समय प्रेम सम्बन्ध लुकाएकी थिइन् ।
उनले आफ्नो विवाह समारोहमा सहभागी हुने पाहुनालाई कुनै प्रकारको उपहार नल्याउन निमन्त्रणा कार्डमार्फत् आग्रह गरेकी छन् । यस अघि प्रेमीका बारेमा कहिल्यै नबताएकी ऋचाले एकैपटिक आफ्ना समर्थकलाई विवाहको सरप्राइज दिएकी हुन् । दिपेक्ष ललितपुरस्थित लबिम मलका म्यानेजर हुन् ।
विवाह वारे जानकारी सार्वजनिक गरेपछि उनले पोखरामा ब्याचरल पार्टीको आयोजना गरेकी थिइन् । उनको ब्याचलर पार्टीमा केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की लगायत सहभागी भएका थिए । केही नजिकका साथीहरुलाई मात्र उनले ब्याचलर पार्टी दिएकी हुन् । उनको ब्याचलर पार्टीमा फेसन डिजाइनर सिवांगी प्रधानलगायत सहभागी थिए । बैबाहिक जीवनमा बाँधिनुभन्दा अगाडि फिल्म ‘हिजो आजका कुरा’ को छायांकन भ्याएकी ऋचा अहिले कमेडी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा व्यस्त छिन् ।
अब, उनी एक महिना पारिवारिक भेटघाट र घुमघामका लागि श्रीमानसँग विदेश जाने बताइएको छ ।
य सरी भयो महन्थ ठाकुर सभामुख बन्ने प क्का !
tadalafil 10 mg – canadian pharmacy tadalafil buy tadalafil 20mg price
monthly cost of propecia – http://finasteridepls.com/ finasteride 5mg tablets
propecia rogaine – http://propechl.com/ propecia before and after
generic tadalafil 20mg – tadalafil teva5mg prezzo generic tadalafil at walmart
Qmyvau – http://virviaga.com/ cheap viagra soft online
Qhphsk – annotated bibliography Vuprjw mwxpyy
Cpfasi – buy generic levitra online Dluvco mijchh
Hyhtmg – furosempi.com Iargfq yczucc
vardenafil buy online – buy vardenafil online cheap vardenafil online sale
[url=http://viagradn.com/]viagra over the counter australia[/url]